Google docs: ny fomba fiasan'ny antontan-taratasy Google | Famoronana an-tserasera
Ny miasa miaraka amin'ny antontan-taratasy amin'ny rahona dia tsy zavatra adala ankehitriny, ny mifanohitra amin'izay no izy. Ary eo amin'ireo safidy maro hafa ananantsika dia ny an'ny Ny antontan-taratasin'i Google dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra. Mahalala Google Docs ve ianao?
Raha tsy fantatrao hoe inona izany, na mbola tsy nampiasanao azy tamin'ny heriny lehibe indrindra, dia hanampy anao izahay hanao izany ary hahita ny iray amin'ireo fitaovana hampiasaina, indrindra raha iray amin'ireo izay mandeha be ianao na manova solosaina ary entina pendrive, dvd's, cd ary kapila ivelany foana.
1 Inona ireo dokam-barotra Google, antontan-taratasin'i Google
2 Fa maninona no miasa ny dokotera Google?
3 Ahoana ny fampiasana Google Docs
4 Ary afaka manafatra antontan-taratasy ve ianao sa mamorona ireo izay natao ao ihany?
5 Ahoana ny fomba hizarana antontan-taratasy amin'ny Google Docs
Inona ireo dokam-barotra Google, antontan-taratasin'i Google
Google Docs, antsoina koa hoe Google Docs, dia sehatra iray hafa; fitaovana natolotr'izy ireo anao avy amin'ny Google ary azo ampiasaina amin'ny solosainao, takelaka, finday avo lenta ... Namboarina izy io mba tsy hila hitondra antontan-taratasy be dia be amin'ny kapila pen, drive ivelany ary ny toy izany , fa aleo mijanona ao anaty rahona. Fa azo sintonina mora ihany koa.
Ity fitaovana ity dia mifanentana tanteraka amin'ireo karazana rakitra, na antonta-tsoratra, na slides, na takelaka ... Raha ny marina, ny "programa" ampiasainao dia "clones" an'ny suite an'ny Office. Ary ny tsara indrindra dia afaka izy ireo. Noho izany, hanana Excel, Word, PowerPoint ianao amin'ny kinova maimaim-poana (ary hahafahanao manokatra miaraka amin'ireo programa ireo ny antontan-taratasy izay nataonao tamin'ireo olon-kafa ireo (sy endrika maro hafa).
Fa maninona no miasa ny dokotera Google?
Alao an-tsaina hoe tsy maintsy mandeha manao dia lavitra ianao. Azo atao ny maka ny antontan-taratasy rehetra ilainao, fa ahoana kosa raha manadino iray ianao ary tsy manana olona handefa azy aminao? Avy eo dia hahita olana ianao. Etsy ankilany, ny fanananao ireo antontan-taratasy ao amin'ny rahona fantatrao fa, na amin'ny findainao, na amin'ny takelaka na amin'ny solosainao, dia ho afaka hiditra amin'izy ireo ianao, hampidina azy ireo, hanonta azy ireo, sns. tsy misy olana.
Tsy izany ihany, fa koa Google docs dia manana tombony izay tsy hitanao amin'ny hafa: ilay azon'ny olona marobe miaraka amin'ny fotoana anaovana fanovana amin'ny fotoana tena izy, amin'ny fomba lasa fitaovana tsara ho an'ny vondrona na ekipa miasa.
Tsy maintsy ampidirintsika amin'izany fa samy manana ny heviny (hanampiana sy hamakiana azy ireo) ary ny firesahana, hiresahana amin'io olona io fa tsy mila miankina amin'ny telefaona na resaka hafa ivelan'ity fitaovana ity (noho izany dia mifantoka amin'ny toerana iray ny zava-drehetra).
Toy izany koa no mitranga amin'ny fanovana, izay hanananao safidy hanovana, fa koa hanoroana hevitra, alao tahaka ny fiasan'ny fanovana ny fanovana ao amin'ny Word, amin'ny fomba ahitanao ny fiovana sy ny safidy hanaiky na hamafana azy ireo, alohan'ny ampahany amin'ny antontan-taratasy farany.
Ary raha mieritreritra ianao fa ho sarotra kokoa ny mampiasa ny Google docs satria mila miankina amin'ny Internet ianao, fantaro fa tsy toa izany. Azo ampiasaina izy io na dia tsy misy Internet aza satria mila manampy extension fotsiny ao amin'ny Chrome ho an'ny Google Documents ivelanao ianao ary alefaso ny safidy Offline ao amin'ny Google Docs, eo amin'ny sehatra. Noho izany dia tsy mila Internet ianao, ary ho avy io aorian'ny fampidinana azy rehetra nefa tsy mila miahiahy na inona na inona ianao.
Ahoana ny fampiasana Google Docs
Raha aorian'ireo izay hitanao dia liana amin'ny Google Docs ianao, dia tokony ho fantatrao fa ny manana kaonty Google hampiasa io fitaovana io no hany ilainao. Raha vantany vao miditra amin'ny mailakao ianao, na avy amin'ny pejin-tranonkalan'i Google aza, dia hanome anao safidy hiditra io. Raha manao izany ianao dia ho hitanao fa hametaka sary misy ny sarin'ny mailakao.
Manaraka, tsy maintsy mamely ny kianja misy teboka sivy izay anananao eo an-tampon'ny efijery ianao. Any no misy hahita rindranasa Google marobe ianao, ary aiza no hisy ny Google Docs. Mila tsindrio fotsiny ny "Documents" dia izay no izy.
Tandremo, raha tsy hitanao izy dia tsindrio ny bokotra "More from Google" dia ho voatanisa ireo fitaovana rehetra, na dia mahazatra aza ny fisehon'izany eo amin'ireo voalohany satria be mpampiasa io.
Vantany vao miditra ianao dia hanana laharana voalohany hanombohana fisokafana rakitra vaovao. Any izy ireo dia hanome anao maodely vitsivitsy toy ny Resume, taratasy, tolo-kevitra momba ny tetikasa, bokikely, tatitra ... Fa koa ny mety hamoronana rakitra banga.
Raha mijery ny Gallery Template ianao, rehefa tsindrio io dia hiditra amin'ny menio manokana an'ireo modely misy ianao, raha mila azy ireo ianao.
Raha manome ny bara marindrano ianao (zoro ankavia ambony, alohan'ny sary famantarana sy ny teny Documents), dia ho hitanao fa isan-karazany ny karazana rakitra azonao sokafana: Documents (teny, soratra), takelaka, famelabelarana ary endrika.
Ary afaka manafatra antontan-taratasy ve ianao sa mamorona ireo izay natao ao ihany?
Raha efa manana antontan-taratasy vita ianao ary ilainao amin'ity fitaovana ity dia fantaro fa tsy hanana olana amin'ny fanaovana azy ireo ianao. Mila manafatra azy ireo fotsiny ianao. Ahoana? Azavainay ireo dingana:
Jereo ny efijeryo. Mitadiava ny famantarana "miampy" eo amin'ny zoro ambany ankavanana. Azo atao izany, eo amin'ny efijery dia tsy hiseho izy io, ka fikafika ny famindra ny totozy miakatra sy midina miaraka amin'ny kodiarana ka miova ny efijery dia hiseho izy avy eo. Rehefa manindry ianao dia hahafahanao mampakatra ny antontan-taratasy tadiavinao avy amin'ny solosainao, pendrive, disk ivelany ... ary afaka minitra vitsy dia ho afaka hiara-miasa aminy ianao.
Ary raha miahiahy momba ny endrika ianao, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia tsy hanana olana ianao, dia hitohy ilay iray noforoninao ivelan'ny fitaovana; ny endriny ihany no mety miova, fa ny endrika kosa dia tokony hotehirizina.
Ahoana ny fomba hizarana antontan-taratasy amin'ny Google Docs
Talohan'ny nanazavanay azy fa ny iray amin'ireo Ny tombotsoan'ny Google Docs dia ny fahaizana miara-miasa amin'ireo maro ao amin'ilay rakitra. Saingy, raha hatao izany, ilaina aloha ny mizara azy. Ary eny, mora toy ny fiasa hafa ihany io.
Mba hanaovana izany dia mila tsindrio ny bokotra eo ankavanana (miaraka amin'ny totozy eo ambonin'ny antontan-taratasin'i Google) ary kitiho ny fizarana. Hahazo efijery kely manao hoe "Mizarà amin'ny hafa." Eto dia manana safidy roa ianao:
Raiso ny rohy hizarana ny antontan-taratasy.
Manampia olona hanao azy. Mba hanaovana izany dia tsara kokoa ny mampiasa mailaka (saingy tadidio fa tsy maintsy avy amin'ny Google izy ireo).
Raha toa ka manampy olona dia mamela anao hanome azy ireo fidirana hanova, haneho hevitra na hijery fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Google docs: ny fomba fiasan'ny antontan-taratasin'i Google